हामी अहिले उनीहरूको जैविक खोजी दृश्यता सुधार गर्न धेरै धेरै ठूला कम्पनीहरूसँग काम गर्दैछौं र उनीहरूको अघिल्लो खोज इञ्जिन अनुकूलन कती हो भनेर साँच्चिकै आश्चर्यचकित छौं। लागत तिनीहरूलाई, तिनीहरूलाई प्राप्त छैन। उनीहरूले शाब्दिक रूपमा भुक्तानी गरिरहेका थिए जुन उनीहरूको अनुकूलनमा चोट पुर्‍याइरहेका थिए।
एक कम्पनीले डोमेनको फार्म निर्माण गर्‍यो र त्यस पछि प्रत्येक कुञ्जी शव्द संयोजनको साथ छोटो पृष्ठहरू मिलाइयो, र सबै साइटहरूलाई क्रस-लि linked्क गरियो। नतिजा डोमेन, ब्रान्ड भ्रम, र भयानक खोज इञ्जिन परिणामहरूको गडबड थियो। हामीले सार्‍यौं र सबै डोमेनहरूलाई एकमा पुन: निर्देशित गर्‍यौं, त्यसपछि प्रत्येक शीर्षकको लागि धेरै जानकारीमूलक पृष्ठहरू निर्माण गर्‍यो ... र days ० दिन भित्र हामी उनीहरू कहाँ थिए माथिको राम्रा श्रेणीमा छैनौं।
यदि तपाइँको एसईओ परामर्शदाता छ अनुकूलन आगन्तुकको अनुभवलाई आकर्षित गर्ने र सुधार गर्ने बाहेक कुनै पनि काम समावेश गर्दछ, तपाईं सम्भवतः आफैंलाई समस्यामा पार्दै हुनुहुन्छ। Douglas Karr, DK New Media
डट कॉम इन्फोवेबाट आएको इन्फोग्राफिकले विभाजन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ र तपाईंले गर्नु पर्ने कामलाई प्राथमिकता दिँदै यदि तपाईं दृश्यता प्राप्त गर्ने आशा गर्नुहुन्छ भने:
मोबाइल प्रतिक्रिया - अधिक र अधिक खोज इञ्जिन प्रयोगकर्ताहरूले मोबाइलको उपयोग गर्दै छन्, यो सुनिश्चित गर्दै कि तपाई मोबाइल प्रयोगकर्तालाई अनुकूलित गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण छ, तपाईंको मोबाइल पृष्ठको गति कम गर्न सहित प्रयोग गरेर गुगल एएमपी.
स्थानीय परिणामहरू - हामी वर्षौं को लागी साझेदारी गर्दै छौं स्थानीय खोज दृश्यता राष्ट्रिय दृश्यता मद्दत गर्दछ तर यो अझै ठूलो छ कि कति कम्पनीहरूले यो ठूलो अवसरलाई वेवास्ता गर्छन्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको कम्पनी सही मा सूचीबद्ध छ व्यवसायका लागि गुगल र उद्धरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् (NAP - नाम, ठेगाना, फोन नम्बर) तपाईंको साइट को प्रत्येक पृष्ठ मा।
गुणवत्ता सामग्री र लिंकहरू - यो जहाँ महान परामर्शदाता फल्छ र भयानक व्यक्ति तपाईं समस्या मा प्राप्त। तपाईंको लक्ष्य महान सामग्री (इन्फोग्राफिक्स जस्तो) बनाउनुपर्दछ र तिनीहरूलाई प्रदर्शन गर्ने प्रासंगिक साइटहरूमा पिचिंग गर्नुपर्दछ (जस्तै हामी DCI को लागी गर्दैछौं)। यो इन्फोग्राफिक हाम्रो दर्शकहरूको लागि मूल्यवान छ त्यसैले उनीहरूलाई उनीहरूको साइटमा लिंक गरेर उनीहरूलाई क्रेडिट दिन यो समझदार हुन्छ। यद्यपि, केवल विज्ञापन-हक राख्दै backlinks अप्रासंगिक, कमजोर गुणस्तरको डोमेनहरूले तपाईंलाई कहिँ पनि पुग्न सक्दैन।
प्रचारात्मक रणनीतिहरु - बहु सामग्री ढाँचा (अडियो, भिडियो, इन्फोग्राफिक्स, माइक्रोग्राफिक्स, सोशलोग्राफिक्स) निर्माण गर्दै, तपाइँको प्रतिस्पर्धालाई हराउँदै, अनावश्यक लि links्कहरू अस्वीकार गर्दै, ब्रान्ड उल्लेखलाई बढावा दिदै, अनलाइन उत्तरहरू प्रदान गर्दछ, भ्वाईस खोजीहरूको लागि अनुकूलित गर्दछ र तपाईंको साइट मोबाइल तयार राख्दै छन्। तपाईंको सामग्री प्रमोट गर्न सबै महान रणनीतिहरू।
यहाँ इन्फोग्राफिक छ, गुगल एसईओ रैंकिंग कारक र २०१ for को लागि प्रचार रणनीतिहरू:
टैग: अडियोब्याकलिinking्कडीसीआईDK New Mediaडट कम इन्फोवेगुगल एम्पगुगल मेरो व्यापारगुगल रैंकिंग कारकगुगल + व्यवसाय को लागीस्थानीय खोजीस्थानीय खोज रैंकिंगस्थानीय खोज दृश्यतामार्केटिंग इन्फोग्राफिक्समार्केटिंग भिडियोहरूमाइक्रोग्राफिक्सनाम ठेगाना फोन नम्बरएनएपीक्रमबद्ध कारकएसईओएसईओ प्रचार रणनीतिहरुएसईओ रैंकिंग कारकसोशलोग्राफिक्स
अगस्ट 12, 2011 मा 9: 56 AM
एसईओ रैंक र ट्राफिक मा अधिक। सबै व्यक्तिहरूले उच्च पद र अधिक यातायात प्राप्त गर्न कोशिस गर्दछन्। अधिक यातायात सामग्री प्राप्त गर्नका लागि कुञ्जी शब्द, पृष्ठ डाउनलोड गति सबै समावेश छन्। यहाँ राम्रो सर्त इन्फोग्राफिक छ विभिन्न साइटहरु संग आफ्नै साइट को विश्लेषण गर्न।
एसईओ लिंक निर्माण सेवा
डिसेम्बर १, २०१ 10 2011:२:2 अपराह्न
hehehe…। वास्तवमै महान ग्राफिक, र वास्तवमै रोचक छ, यो धेरै स्पष्ट ...
नम्बर एक हुनु यो सजिलो कार्य होइन, तपाईं साँच्चिकै रचनात्मक हुनुपर्दछ र तपाईं साँच्चै कडा परिश्रम गर्न इच्छुक हुनुपर्छ।
अप्रिल 6, 2017 मा 12: 32 एएम
इन्फोग्राफिक लाई माया गर्नुहोस्! यस अद्भुत लेख डगलस को लागी धन्यवाद! म सोचिरहेको थिएँ, के तपाईंलाई लि think्क निर्माण रणनीतिको रूपमा अतिथि पोष्टिंग अझै पनि यस वर्ष प्रभावी हुनेछ?
अप्रिल 6, 2017 मा 12: 35 एएम
हो ... तर प्रकाशकको ​​रूपमा म आधा गधा लेखहरू भन्दा थोरै बढ्दैछु जहाँ मान्छेहरू मेरो साइटमा लिंक सार्न कोशिश गर्दैछन्। मलाई लिंकको साथ कुनै समस्या छैन जब जानकारी आश्चर्यजनक हो र मेरो दर्शकहरूको लागि मूल्यको। अरू केहि पनि अपमान मात्र हो।
अप्रिल 6, 2017 मा 8: 52 एएम
म तपाईंसँग सहमत छु - तर त्यहाँ सधैं अपवाद हुन्छन्। यदि लेख राम्रोसँग लेखिएको छ र मान दिन्छ भने, लिंकले चोट पुर्‍याउँदैन।
अप्रिल 18, 2017 मा 11: 04 एएम
Ppoor गुणवत्ता लिंक वास्तवमा गर्न सक्छन् चोट छ, यद्यपि!